Mugovera, Gumiguru 24, 2020
Mudunhu reTambov, basa ririkuenderera mberi rekuwedzera nzvimbo yevhu rakadiridzwa. Muna 2020, dunhu rinoronga kupa mahekita mazana masere eminda iri kudiridzwa.
Maererano nedhipatimendi rezvekurima redunhu, mumakore matatu apfuura, masisitimu ekudiridza ane huremu hwakakwana hwemahekitita zviuru zviviri akavakwa uye kupihwa nzvimbo mudunhu reTambov sechikamu chechirongwa chebazi "Kufambiswa kweiyo Land Reclamation Complex yeRussia". Mbatatisi, chibage, soya, uye shuga beets dzinodyarwa munzvimbo dzinodiridzwa.
Zvingangoitika mibvunzo nezvekurima mbatata
ADAPT chirongwa chakanangana nekudzidza nzira dzekugadzirisa matapiri kumatambudziko akawanda
Kukohwa mbatatisi kunoenderera mudunhu reTambov
Yakapfuma mbatatisi chirimwa chinotarisirwa kuChina
Kudyara kwemiriwo uye matapiri akanganiswa nedutu muPrimorye
Ukraine inoronga kuwedzera kugadzirwa kwemaindasitiri matapiri
Muna 2020, mhuri dzinosvika zviuru mazana matatu muTyva dzakabatsirwa nerutsigiro rweSocial Potato hwemagariro
Muna 2020, varimi vekurima vanoronga kuendesa mahekita 800 epasi rakadiridzwa. Mumwe wevatori vechikamu mukusimudzira chirongwa cheLand Reclamation Complex yeRussia chirongwa cheZolotaya Niva LLC, Belaya Dacha Farming LLC uye Tambovagrofood LLC.
Maererano nedatha yeTambovmeliovodkhoz panhamba 01.01.2020, muTambov mudunhu rose yakarongwa kudiridza mahekita zviuru zvisere zvepasi rekurima.
Tags: mbatatisi inokurakudiridzaTambov nzvimbo
Nyika dzeEUU dzinobvisa mabasa etsika panotengeswa mbatatisi, hanyanisi uye karoti
Agrofirm KriMM inopa mbatatisi yembeu kuSerbia
HR mubvunzo. Taura mu teregiramu chiteshi chemagazini
Bhatani rembatata dzeTyumen dzakatumirwa kuUzbekistan
Mbatatisi dzichiri kukushamisa iwe!
MuTajikistan, nzvimbo iri pasi pemapoto ichawedzera ne40-50%